China 3D Nylon vita pirinty vita amin'ny kapila vita pirinty YH Series sy mpanamboatra | DEDGE
Tady karipetra / Karipetra birao / Karipetra modular
Trano fiasana, efitrano fiandrasana seranam-piaramanidina, hotely, banky, efitrano fandraisam-bahiny, moske, fiangonana, efitrano fihaonambe, lobby, lalantsara, lalantsara, casino, trano fisakafoanana ary faritra hafa ho an'ny daholobe.
Kofehy kofehy 100% Nylon
Inona no atao hoe carpet?
Ny Carpet Tiles dia matetika fantatra amin'ny anarana hoe "Patch Carpet", izay karazan-java-misokatra vaovao miaraka amina fitaovana vita amin'ny elastika ho fanamafisana ary hokapaina efamira. Ankehitriny Carpet Tiles dia be mpampiasa, toy ny birao, efitrano fihaonambe, hotely, sekoly, seranam-piaramanidina sy faritra hafa misy fifamoivoizana.
Firy ny karazana kapila vita amin'ny karipetra?
Arakaraka ny loko loko, mizara ho karipetra jacquard sy karipetra miloko tsotra;
Raha ny filazan'ny valin'ny karipetra dia azo zaraina ho taila kapila nylon sy taila karipetra pp izy;
Raha jerena ny fitaovana any ambadika any ambany, dia azo zaraina ho Pvc back, Polyester tsy misy tenona, back Bitumen.
Araka ny habe dia azo zaraina amin'ny karipetra sy ny kapila vita amin'ny kapila.
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny karazana kapila vita amin'ny karipetra?
Ny endri-javatra an'ny Nylon Carpet Tiles dia malemy kokoa ary manana faharetana tsara. Izy ireo dia mety amin'ny faritra be mponina. Aorian'ny fanadiovana dia vaovao toy ny vaovao ny tampon'ny karipetra. Ny fiainam-panompoana dia dimy ka hatramin'ny folo taona eo ho eo. Ny sasany amin'izy ireo dia afaka mandalo ny fitsapana fiarovana ny ambaratonga B1. Ny mpiara-miasa dia nampiasa kofehy karipetra DEGE Brand, izay efa nampiasaina efa-taona ary mbola salama tsara.
Na izany aza, ny polypropylene Carpet Tiles dia marefo amin'ny faharetana, manindrona amin'ny fikasihan-tanana, tsy mora mandray rano, fiainana kely fanompoana, ary endrika ratsy aorian'ny fanadiovana. Ny fiainana serivisy dia telo ka hatramin'ny dimy taona ary ny vidiny dia ambany noho ny taila kapila nylon. Ny Polypropylene Carpet Tiles dia manana endrika marobe ary ampiasain'ny mpanjifa izay miova matetika.
Inona no tombony azo avy amin'ny Carpet Tiles?
1. Ny kapila vita amin'ny karipetra dia mety ho fitambarana lamina, ary ny famoronana dia mety ihany koa. Izy io dia afaka mamerina ny vokatr'ilay karipetra amin'ny ankapobeny araka ny fikasan'ny tompony na ny fomban'ny toerana manokana amin'ny alàlan'ny kolontsaina famoronana loko, loko ary endrika hafa. Izy io dia tsy afaka manolotra tsiro voajanahary tsotra sy tsotra fotsiny, fa mampiseho henjana ihany koa, ny lohahevitra mirindra sy tsy miovaova dia afaka misafidy fomba maoderina manasongadina fironana kanto toa ny avant-garde sy ny toetra koa.
2. Ny kapila vita amin'ny karipetra dia mety amin'ny fitehirizana, famoahana ary famoahana, fitaterana ary fananganana. Ny famaritana mahazatra ny kapila vita amin'ny karipetra dia 50 * 50cm sy 20 tapa / baoritra. Raha ampitahaina amin'ny karipetra feno dia tsy mila fametahana sy famoahana mekanika matihanina izany, ary tsy mila mpiasa an-tsokosoko betsaka hitondrana azy, mainka aza fa hanasarotra ny fidirana amin'ny ascenseur. Noho izany dia mety indrindra amin'ny fananganana tranobe avo be izy io. Miaraka amin'ny famaritana mazava tsara sy ny fivoriana mety, dia afaka manatsara be ny fahombiazan'ny paving.
3. Ny taila karipetra dia mora tazomina. Ny taila vita amin'ny karipetra dia azo havaozina amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana ilaina. Mora ny mitazona, manadio ary manolo. Ho an'ny karipetra efa tonta sy maloto eny an-toerana dia mila mivoaka sy manolo na manadio azy tsirairay fotsiny ianao. Tsy ilaina ny manavao toy ny karipetra feno, izay mamonjy ahiahy, ezaka ary vola. Ho fanampin'izany, ny fanaparitahana sy fanangonana ny taila vita amin'ny karipetra dia manome fahafaha-manao amin'ny fikojakojana ara-potoana ny tariby sy ny fampitaovana fantsona eo ambanin'ny tany.
4. Ny toetra mampiavaka ny karipetra toradroa dia misy fampisehoana manokana tsy tantera-drano sy hamandoana, noho izany dia mety indrindra amin'ny fananganana ny gorodona na tranobe ambanin'ny tany. Mandritra izany fotoana izany, ny kapila vita amin'ny karipetra dia manana ahiahy maharitra ihany koa, fananana antistatika ary fitoniana dimensional tsara sy fitazonana endrika ivelany.
Tombontsoa vita amin'ny kapila
Famaritana taila kapila
Vahaolana 100% nolokoana
Stock / Customize mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa
50cm * 50cm, sns.
Fampiasana fifanarahana mavesatra
MOQ Namboarina: 1000sqm
Tsy misy fonosana Pallet: fonosana anaty baoritra; miaraka amin'ny fonosana Pallet: fonosana anaty baoritra misy paleta hazo eo amin'ny farany sy tombo-kase plastika.
Tsy misy fonosana Pallet: 20pcs / ctn, 5sqm / ctn, 900CTN / 20ft, 4500sqm / 20ft (22kgs / ctn); Miaraka amin'ny fonosana Pallet: 20ft: 20pcs / ctn, 5sqm / ctn, 56ctns / pallet, 10pallets / 20ft, 560ctns / 20ft, 2800sqm / 20ft (22kgs / ctn)
10-25 andro fiasana aorian'ny nahazoana ny petra-bola
30% T / T mialoha ary 70% T / T ao anatin'ny 7 andro aorian'ny nahazoana ny kopia B / L) / L / C tsy azo ovaina 100% amin'ny fahitana, fandoavam-bola Paypal Sns
Ahoana ny fomba hametrahana taila karipetra?
Amin'ny ankapobeny, ny lanjan'ireo taila karipetra dia manodidina ny 500-900 grama isaky ny metatra toradroa, ary ny lanjan'ny karipetra matevina sy matevina dia ambony kokoa. Noho izany, ny fiviliana mavesatra ateraky ny karipetra dia mora avahana amin'ny maso mitanjaka. Ity fomba fitsapana ity dia voafetra amin'ny fampitahana ny karipetra mitovy
Ahoana no hitsarana ny kalitaon'ny Carpet Tiles?
Lisitry ny fonosana vita amin'ny taila kapila
andian-dahatsoratra Size / PCS PCS / CTN SQM / CTN KGS / CTN Quantity / 20ft (Tsy misy fonosana Pallet) Quantity / 20ft (Miaraka amin'ny fonosana Pallet)
Deot 50 * 50cm 24 6 22 800ctns = 4920sqm 64ctns / pallet, 10pallets = 640ctns = 3840sqm
Drafitra famokarana tile vita amin'ny kapila
Masinina Loom 1
Milina fametahana 2
Trano fivarotana 5
Masinina miverina 3
6 Manisy entana
Teo aloha: Kitapo kapitaly nylon Carpet TH Series
Manaraka: Fampiharana farany momba ny varotra kapila farany vita amin'ny kapoaka
Methord fametrahana taila kapila
1.Sokafoy ny sticker vita amin'ny karipetra ary apetaho eo ambanin'ny fanamafisana ny kapila ny karipetra
2. Ataovy ny taila kapila faharoa raha tsy ilay voalohany arakaraka ny dingana 1
3. Mametraha taila karipetra hafa amin'ny sisin'ny sisiny
4. Tsindrio ny mpiray rehefa vita ny fametrahana kapila kapila
Toro-lalana fametrahana fametrahana taila kapila
Misy zana-tsipika fitodihana any ambadiky ny taila vita amin'ny karipetra, izay taratry ny torolàlana mitovy amin'ny fonon'ny karipetra. Rehefa mametraka, tandremo ny tsy fitovizan'ny fitarihan'ny zana-tsipìka. Na dia mitovy isa aza ny isa miloko, ny taila fanitsiana ihany no mitovy, tsy hisy fahasamihafana hita maso Noho izany, ny karipetra mivondrona dia afaka mahatratra ny fijerin'ny karipetra lehibe mihodina. Ho an'ny manokana na arakaraky ny toetran'ny endrika karipetra sasany (toy ny karipetra miolaka mahazatra), dia azo apetraka amin'ny tendrony na tsy ara-dalàna ihany koa.
Tendrombohitra karipetra ara-barotra DY Series
Polypropylene Carpet Office Carpet Tile DH Series
Kapitaly mainty volontany kapila DT Series